यो हुनै सक्दैन !!! Nobody believes (प्रेरणादायी कथा) - Lekhapadhi Motivational Story : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
यो हुनै सक्दैन !!! Nobody believes (प्रेरणादायी कथा)
लेखक : लेखापढी १८ भाद्र २०७७, बिहीबार १५:५३ मा प्रकाशित
एउटा गाउँमा दुई जना मिल्ने साथी थिए । एउटाकाे उमेर १२ बर्ष थियाे र अर्काेकाे उमेर १५ बर्ष थियाे ।
एक पटक दुबै जना साथि घुम्न निस्किए । घुम्दा घुम्दै उनीहरू टाढा जंगलमा पुगे । अकस्मात १५ बर्षकाे केटा खाेल्साेमा रहेको खाडलमा खस्याे ।
खाल्डाे गहिराे थियाे तर पानी थिएन । त्यस केटाेले खाल्डाेबाट निस्किने प्रयास गर्याे तर उ निस्किन सकेन । उ रूदै बसिरह्याे । अर्काे १२ बर्षकाे साथिले माथिबाट हार गुहारका लागि जाेर जाेर संग चिच्यायाे तर जंगलकाे बीचमा कसैले सुन्ने कुरा भएन । सहयाेगका लागि काेही पनि आएनन् ।
उसले खाल्डाेमा रहेकाे साथिलाई हरसम्भव खाल्डाेबाट माथि ल्याउने प्रयास गर्याे तर सफल भएन । उसले हार गुहार मागेकाे पनि कसैले सुनेनन् ।
उसले एउटा जुक्ति निकाल्याे नजिकै रहेका रूखका लहराहरूलाई जाेडेर डाेरी बनाएर डाेरीकाे सहायताले तान्याे । पहिलाे पटक सफल भएन । धेरै पटक प्रयास गरेपछि अन्ततः उ आफ्नाे साथिलाई निकाल्न सफल भयाे ।
दुवै जना खुशी भए । उनीहरू गाउँ फर्किए ।
उनिहरूले गाउँलेलाई जंगलमा भएकाे घटना सुनाए । सबैले याे हुनै नसक्ने कुरा भने । एउटा बच्चा जाे १२ बर्षकाे मात्र थियाे उसले १५ वर्षकाे बच्चालाई खाल्डाेबाट तानेर निकाल्न सक्ने, त्याे पनि डाेरी बनाएर याे हुने नसक्ने भने । कसैले पनि उनिहरूकाे कुरा पत्याएनन् ।
यसै बीचमा एकजना भद्रभलादमी मान्छेले भने “यीनीहरू सही बाेलिरहेका छन् ।” फेरी उनले भने “यी बच्चा सहि बाेलिरहेका छन् की झुटाे, त्याे महत्वपुर्ण कुरा हाेइन याे महत्वपुर्ण हाे की त्याे सानाे बालकले यत्राे ठुलो मानिसलाई तान्ने बल कहाँबाट आयाे र याे जुक्ति कसरि निकाल्याे ?”
याे सानाे फूच्चे केटाेले जो समस्याबाट भागेन, उसले अनेकन जुक्ति लगायाे र उसमा विश्वास थियाे की उसले आफ्नाे साथिलाई खाल्डाेबाट निकाल्नु पर्छ भन्ने । उसलाई आफ्नो साथीलाई जसरि पनि निकाल्नु पर्छ भन्ने संकल्प थियो ।
यदि त्यहाँ अरू काेही थप मानिस हुनेथिए भने पक्कै पनि अरूले त्याे बच्चालाई भन्ने थिए की तिमि याे गर्न सक्दैनाै तब सायद उसले त्याे काम गर्न सक्ने थिएन । अन्य मानिसकाे साेचले उनीहरूलाइ कमजाेर बनाइरहेकाे हुन्छ ।
तर उसले याे काम गरेर देखायाे किनकि त्यहाँ उसलाई निरूत्साहित गर्ने मानिसहरू थिएन ।
यस कथाकाे शिक्षा याे हाे की मानिसहरू अरूलाई कमजाेर, हताेत्साहि बनाउन अनेकन प्रयास गर्छन, त्यसैले मानिसहरू के भन्दछन् भन्ने तिर हाेइन आफ्नाे क्षमतालाई कम नठानेर आत्मविश्वासलाई जगाइराख्नुहाेस, पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ ।
यस्तै प्रकारका प्रेरणादायी कथाहरू पढन् हाम्राे वेवसाइट हेर्दै गर्नुहाेला र तपाइहरूका सिर्जना, अनुभव र विचारहरू पठाउन lekhapadhee@gmail.com मा इमेल गर्नुहाेला ।